SARUDZA MUTAURO Albanian Amharic Arabic Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Fijian Finnish French Georgian German Greek Hiligaynon Hungarian Igbo Indonesian Italian Japanese Kirundi Korean Lithuanian Malagasy Myanmar Norwegian Ossetian Polish Portuguese (Brazil) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sepedi Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Thai Tigrinya Tsonga Turkish Ukrainian Vietnamese
Jesu airevei paakaudza Sauro kuti: “Kuramba uchikava zvibayiso kunoita kuti zvikuomere”?—Mabasa 26:14.
▪ Munguva dzeBhaibheri, varimi vaishandisa zvibayiso pakudzora mhuka padzinenge dzichirima. Chibayiso chaiva chimuti chakareba mamita anenge maviri nechidimbu. Rimwe divi rechimuti ichi raiva nesimbi yakapinza. Mhuka yaigona kuzvikuvadza kana ikavhizura chibayiso chacho. Kazhinji rimwe divi rechimuti ichi raiva nesimbi yakaita sechizera iyo yaishandiswa pakubvisa tsvina, ivhu uye masora pagejo.
Dzimwe nguva zvibayiso zvaishandiswa sezvombo. Mumwe mutongi ari zvekare musoja wechiIsraeri ainzi Shamgari akauraya vaFiristiya 600 achishandisa “chibayiso chemombe.”—Vatongi 3:31.
Magwaro anotaurawo nezvechibayiso kufananidzira zvimwe zvinhu. Somuenzaniso, Mambo Soromoni akanyora kuti mashoko emunhu akachenjera ‘akaita sezvibayiso zvemombe’ zvinobatsira shamwari kuti isarudze zvakanaka.—Muparidzi 12:11.
Jesu paakamutswa akashandisawo fananidzo iyi. Akapa zano kuna Sauro uyo aitambudza vaKristu kuti arege ‘kukava zvibayiso.’ Mashoko aya anoita kuti tifunge nezvemhuka ine undururani inoramba kuteerera zvinodiwa navatenzi vayo. Sauro akaita zvine musoro paakateerera zano raJesu achibva achinja mararamiro ake akava muapostora Pauro.
VaJudha vomuzana remakore rokutanga vaiziva sei pava nenguva kana hwava usiku?
▪ VaJudha vairarama muzana remakore rokutanga C.E. vaigona kushandisa mumvuri wechimuti kuti vazive mafambiro anenge achiita nguva pakunenge kune zuva. Zvisinei kana makore akadzikatidza zuva kana kuti hwava usiku, vaishandisa mudziyo unoiswa mvura unonzi clepsydra. VaIjipiti vekare, vaPezhiya, vaGiriki uye vaRoma vaishandisawo mudziyo uyu.
Maererano neThe Jewish Encyclopedia, mabhuku anonzi Mishnah uye Talmud paanotaura nezvemudziyo uyu anoshandisa mazita akasiyana-siyana, pamwe zvichibva pakuti mudziyo wacho wagadzirwa sei, asi ose achireva kudonha kunoita donhwe rimwe nerimwe remvura, zviri izvo zvinorehwa neshoko rokuti clepsydra muchiGiriki.
Mudziyo uyu waishanda sei? Gaba raigadzikwa pamusoro perimwe, repamusoro roboorwa kaburi nechepazasi, mvura yobuda nepakaburi aka ichipinda mugaba riri nechepazasi. Kuti munhu azive pava nenguva aitarisa mvura inenge yasara mugaba rokutanga kana kuti inenge yava mune riri pasi. Rimwe nerimwe raigona kunyorwa mumativi kuratidza kuti mune mvura yakawanda zvakadini.
Mudziyo uyu waishandiswa mumakamba emasoja eRoma pakuita majana okurinda usiku. Pairidzwa bhosvo kuratidza kuti chijana chomumwe chatanga. Munhu wose ainzwa bhosvo richirira aigona kuziva paitangira uye paiperera majana ose ari mana okurinda usiku.—Mako 13:35.
w11 8/1 p. 23